Tengesa izvozvi kuti utangezve kudyara mushure mezororo | Ehupfumi Zvemari
Jose recio | | Bolsa, General hupfumi, Zvigadzirwa zvemari
Ehe, kana iwe uri muzvinashawo ane ruzivo mune misika yezvemari, iwe unenge wanzwa chirevo chakadai kanopfuura kamwe. tengesa muna Chivabvu woenda ii sai. Mune mamwe mazwi, "tengesa muna Chivabvu uye uende", inova dudziro yayo chaiyo uye inoratidza pfungwa yemusika iyo yakawanda yenguva inosangana nekutendeka kukuru. Kune rimwe divi, ndicho chikonzero chakakwana chekuti iwe ubude muhombodo munguva yezhizha uye dzoka imwe nguva mukudonha. Asi zvichave zvakakosha kuti uongorore kana zvichikwanisika kana kuti kwete chokwadi chekuti iwe unoshandisa zano iri mune yakakosha mari.
Chero zvazvingaitika, pane mubvunzo waunofanirwa kuzvibvunza izvozvi uye ndiwo unotevera. Chii chaunowana kubva pakushandisa iyi yakasarudzika zano? Huye, zvakanyanyisa kukosha zvakanyanya izvo zvinogara muchokwadi chekuti pamusoro pezvose iwe unodzivirira kuiswa mari mune imwe nguva nguva iyo zvikamu zvave nazvo nhoroondo yakaderera zvibereko. Izvo hazvina kugara zvakadaro, asi kana ukazvibvumira kutorwa nenhamba dzemakumi emakore apfuura uchaona kuti uri muchisarudzo chakarurama kupfuura zvese.
Kune rimwe divi, pane imwe pfungwa mu mari yemari mune izvo zvinokunda izvo iyo mwaka hachisi chinhu chinofambisa musika wekutengesa. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoenderana neimwe nhevedzano yemari parameter, kusanganisira maitiro esheya, index kana stock chikamu Izvi, sezvazviri mune zvese zvinogadzirwa mumari, zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi.
1 Ndezvipi zvikonzero zvaunofanira kutengesa?
2 Bearish nguva par kugona
3 Chii chaungaite izvozvi?
4 Tora simba rebund
5 Mirira kuti mitengo iri nani isvike
6 Chii chekuita mune aya mamiriro?
Ndezvipi zvikonzero zvaunofanira kutengesa?
Zvisinei, pane hunyengeri mune mazwi echinyorwa chino akakodzera kune ese marudzi evashambadzi uye ndiyo nzira yemusoro wenyaya wekukurukurirana pachawo. Nekuti zvinonyatso kusangana nesangano re "tengesa muna Chivabvu uye uende, uye usadzoke kusvika pakati paGunyana kuti utangezve kudyara. Ichi chirevo chakakurumbira icho hachisi chokwadi chazvino, asi chave chichiitika kwemakore mazhinji. kudyara mumisika yemari. Pamwe kubva panguva yasekuru nasekuru vako kana kunyangwe gare gare.
Izvo hazvifanire kukanganikwa pasi pechero mamiriro ezvinhu kuti ino hunhu sarudzo iri nekuda kwekuti kudzoka munguva ino kwave kuri nhoroondo yakaderera kupfuura kune vamwe. Chikonzero chakaringana kukwana kuti ugare kure nemisika yemari kubva zvino. Saka hauzove nesarudzo kunze kwekufunga nezvazvo zvishoma kupfuura dzimwe nguva nekuti iri mushure memari yako yese yauri kubhejera. Uye pachinhu ichi hapana manzwiro akakosha sezvo iwe uchichiida pamusoro pezvimwe zvinhu kuita kuti kuchengetedza kubatsire. Hapana chimwe uye hapana zvishoma.
Bearish nguva par kugona
Chero zvazvingaitika iwe unofanirwa kurerutsa kuti ino nguva ichangotanga ndeimwe yeakanyanya kusimba egore. Uye nekusara kusingawanzo kwakaitika nekuda kwekubatana kwemisika yemari pachavo. Kubva pane ino mamiriro, chiyero chakanyanya kungwara chaungatore mune yako inotevera sarudzo ndeyekusavapo iwe kubva kune chero zvemari mashandiro mumusika wemasheya. Kunyangwe hazvo mutambo unoenda zvisirizvo kwauri. Ndokunge, iyo equities vari bullish mumwedzi iyi. Nekuti iyo poindi ikozvino ndeyekuti iwe une zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Uye yakazara kwemwedzi yakati wandei iyo ichapfuura nekukurumidza kwazvo.
Kune rimwe divi, idzi mwedzi dzinoitika kubva Chivabvu zvine njodzi huru nekuti ivo vane hanya kwazvo nenhau kana zviitiko zvisingafanoonekwe. Sezvazvakaitika mumakore achangopfuura, sekune rimwe divi iwe uchazoziva kubva kunzvimbo dzakanaka kwazvo. Saka hazvikuvadze kutora nguva yekufungisisa usati waenda kuzororo. Kana zvirinani uine portfolio mukudyara yakanyanya kureruka pane iyo iwe yawakave nayo kusvika zvino.
Ino inguva yegore apo kutenga zviyero mumari kunozorora zvakanyanya. Kunyangwe pamatanho anoonekwa mune mamwe makore uye inobvumira kutengesa kuitiswa nekujekesa kukuru. Nekuti mushure meiyo nguva yezororo kuti usvike zvakanyanya kusimbisa kushandisa vamwe mimwe mitengo yemakwikwi kupfuura pakutanga. Ndokureva, kutenga masheya nekuita kushoma kwehupfumi pane kupera kwezuva kana zvasvika pakuisa mari mumusika wemasheya. Kunyangwe chiri chokwadi kuti aya akasarudzika mamiriro haana kuzadzikiswa gore rega rega.
Chii chaungaite izvozvi?
Uyu ndiwo mubvunzo wemamirioni emadhora unouya kune vakawanda varimari vadiki nepakati. Zvakanaka, haisi mhinduro iri nyore kujekesa, kure nazvo. Asi iwe une muruoko rwako zvimwe zvingasarudzwa zvaunogona kutendeukira kune izvi chaizvo nguva. Iwe unoda kuziva here mamwe eaya marongero ekuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire mumwedzi ino yezhizha? Zvakanaka, nyatsoteerera izvozvi nekuti unogona kubuda mune inopfuura imwe dambudziko mumamiriro ezvinhu aripo.
Raw materials: Zviri pachena kuti iri kudyara nekukura kukuru kugona panguva ino. Semuenzaniso mune chaiyo kesi yemafuta. Hazvishamise kuti iri kuvandudza rally yekusimudzira iyo inogona kutotungamira mitengo yayo kupuruzira iyo yakakosha nhanho yemadhora zana dhiramu kubva makumi masere euros. Izvi mukuita zvinoreva kuti ichine 100% yekufamba. Uye izvo zvinogona kuve mhinduro kumatambudziko ako ekudyara panguva ino yakaoma zhizha iwe yauri kumberi.
Tora simba rebund
Kana paine hupfumi hune simba mukati meEuropean Union, zviri pachena kuti iro reGerman. Uye nepfungwa iyi, zano rako rinogona kunge rakavakirwa pane ekuvhura zvinzvimbo munzvimbo yeGerman bund. Ehezve, purofiti yayo haizove inoshamisa kwazvo, asi ichasangana nekutarisira kwako kwekudyara kwemwedzi iri kuuya. Kurwisa chii icho chikwereti chakakomberedza iyo inomiririrwa munyika dzakaita seSpain, Portugal, Italy uye kunyangwe Greece pachayo. Hazvishamise kuti chikamu chakanaka chemari inoyerera kutenderera pasirese chinopotera mune ino inokosha yezvemari pfuma.
Iwe haugone chete kuvhura nzvimbo munzvimbo yeGerman bund zvakananga. Kana zvisiri, pane kudaro, iyo yakapusa nzira inogadzirwa kuburikidza ne Investment funds izvo zvino funga nezve iyi imwe nzira kuitira kuchengetedza kunobatsira. Kana iwe uchida, iwe unogona kuzvibatanidza pamwe nezvimwe zvemari zvinhu, zvese kubva kuemaiti uye mari yakatarwa. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakisa mamiriro ekuti kusiyanisa mari dzako kubva zvino zvichienda mberi. Saizvozvowo, iwe unobvisa zvisina basa njodzi dzinogona kukupa unopfuura kusada munzvimbo dzakashama kusvika zvino.
Mirira kuti mitengo iri nani isvike
Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kuzvipa iwe mukana wemutengo: kana iwo masheya akakosheswa panguva iyo muridzi wemari anga ari kunze kwemusika, mumwe munhu akazadzisa iri rakakosha zano angadai akarasikirwa nemabhenefiti iwayo. Munguva yemusika wazvino wepasi rose wemombe, chikumbiro chako chakashanda zvine mutsindo pazviitiko zvakawanda. Wadii kuzviita iwe pachako nguva ino? Ehezve, pane zvakawanda iwe zvaunogona kuwana kubva kune aya maitiro atinokurudzira kubva kuchinyorwa chino.
Zvisinei, buda uye pinda mumisika Nekuda kwekuchinja kwekarenda kunosanganisira mari zhinji. Iko kune mari yemubhadharo, kubva kumakomisheni ane chekuita nekutenga uye kutengeswa kwemasheya kune mhedzisiro mhedzisiro. Saka zvese zvinoenderana nemamiriro ezvinhu ega ega maanowana investor wega, sezvaari iwe. Ichi chinhu icho vatengesi vanogovera mashandiro avo kune yepakati uye kunyanya kwenguva refu havangapfuure. Iine yakachengetedza yakawanda mumakomisheni uye zvese zvinodhura mukutungamira kwayo uye kugadzirisa.
Chii chekuita mune aya mamiriro?
Chero nzira, kana iwe uri muzvinashawo ari kunanga kwenguva yakareba uye achida kuwedzera rako remari, iwe unofanirwa kuziva kuti kushayikwa uku kuwedzerwa mumwedzi yezhizha kunogona kukuvadza yako portfolio. Neichi chikonzero, chisarudzo chakaomesesa kuita, kunyangwe kukunda kuve mukushomeka pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero. Izvi zvinodaro nekuti chekutanga pane zvese unofanirwa kutsvaga kuchengetedzeka mumafambiro aunodyara kubva zvino zvichienda mberi. Pamusoro pekubatsira iwe kwaunogona kuwana mukirasi ino yekushanda mumisika yemari.
Mupfungwa iyi, sarudzo yakanakisa inofanirwa kunge yakavakirwa pane ongororo yezvinodiwa zvakanyanya. Uye zvichibva pane ino musiyano, tarisa Ndeipi mamiriro ezvinhu emari yemasheya. Sezvo hazvizove zvakafanana kutarisana neyakajeka yakajeka kune vamwe vane bearish zvinoreva. Kusvika padanho rekuti marongero ako ekudyara anofanirwa kuve akasiyana zvakasiyana. Zvirinani zvine chekuita nezve ipfupi nguva muhutongi hwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Tengesa izvozvi kuti utangezve kudyara mushure mezororo